हतारो छैन रे आस्थालाई – Janaubhar
हतारो छैन रे आस्थालाई
प्रकाशित मितिः आइतवार, साउन ६, २०७० | 427 Views ||
आख्यान क्षेत्रमा नयाँ पाइला चाल्दै गरेकी साहित्यकार उमा सुवेदीको चर्चित उपन्यास तोदा ।
तोदामा खास के रहेछ ?
–तोदामा वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली महिलाहरुले भोग्नुपरेका समस्याहरुको बारेमा लेखिएको छ । त्यसको साथसाथै विश्वको कुख्यात तानाशाह हिटलरले यहुदीहरुमाथि गरेको बर्बर दमनपछि त्यहाँका जनता खासगरी महिलाहरुमा परेको असरको बारेमा मार्मिक ढंगले लेखिएको छ । कुनै पनि देशमा कुनै पनि बहानामा गरिएको युद्धमा सबैभन्दा बढी महिलाहरु नै प्रभावित हुने गरेको कुरा तोदामा उल्लेख छ ।
–आख्यान र गैर आख्यान दुबै पढ्न मन पर्छ ।
कोठामा चामल सक्केको था’छैन, पुस्तक किन्न छोड्नुहुन्न रे !
–हाहाहा । ठ्याक्कै त्यही नै त नभनौं । के कुराचाहिँ सत्य हो भनुँ । चामल बरु उधारै किनेर भए पनि किताबमा जोड दिन्छु । किताब किन्न अलि सौखिन नै छु । आफूलाई पढ्न मन लागेको किताब नकिनिरहन सक्दिनँ ।
मासिक रुपमा कति खर्च गर्नुहुन्छ नि पुस्तक किन्न ?
–मासिक खर्चको केही टुंगो नै हुँदैन । बजारमा हल्ला चलेका, पत्रपत्रिकामा चर्चा गरिएका तथा समसामयिक खालका कुनै पनि किताब किनिहाल्छु । यसो गर्दा कहिलेकाँही त झुर किताब पनि पर्दा रहेछन् । बरु किनेर दराजमै थन्किएर बस्छन् किताबहरु । तर किन्न भने छोडिन्न ।
–त्यस्ता धेरै किताबहरु पढियो जसले हृदयको कोमल कुनोलाई हल्लाएर गए । आज पनि म सबैभन्दा बढी निकोलाइ अस्त्रोभस्कीको अग्निदीक्षाको मुख्य पात्र पावेललाई सम्झिरहन्छु ।
अग्निदीक्षा क्रान्तिको समयमा आफ्नो जीवनलाई पार्टी र क्रान्तिको लागि समर्पित गर्दागर्दै युद्धमा घाइते भएको एउटा योद्धाको कथा हो, जो शान्तिप्रक्रियामा आइपुगेपछि आफ्नै सहयोद्धा कमरेडहरुबाट अपहेलित हुन्छ ।
आज हाम्रो देशमा भएको जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा घाइते भएका योद्धाहरुप्रतिको बेवास्ता देख्दा मलाई अग्निदीक्षाका पात्रहरुको सम्झना हुन्छ र भावुक बनाउँछ ।
कस्तो बेलामा रचना सिर्जना गर्नुहुन्छ ?
–समाज र मानव जीवनमा घट्ने घटना र परिघटनाहरुले मनलाई उद्धेलित बनाएको अवस्थामा रचनाहरु सिर्जना गर्छु ।
पाठकलाई सधैंभरि फुटकर रचनाले मात्रै ठग्ने कि केही कृति निकाल्ने योजना पनि छ ?
कविताहरु लेखि नै रहेकी छु । कृति नै निकाल्न हतार गर्नुपर्छ जस्तो त मलार्ई लाग्दैन तैपनि केही समय पछि नै कवितासङ्ग्रह निकाल्ने तयारीमा छु ।
–आफूले लेखेका रचनाहरु आफूलाई रामै्र लाग्छन् किनभने ती आफ्नै सन्तानजस्ता हुन् । एउटी आमाले आफ्ना सबै सन्तानलाई बराबर माया दिएजस्तै एउटा सर्जकले पनि आफ्ना सबै सिर्जनाहरुलाई माया गरेको हुन्छ ।
मलाई मेरै कविताहरुको कुरा गर्ने हो भने ‘नायक र अभिनय’ कविता अलि बढी मन पर्छ ।
तपाईं आम महिलाहरुभन्दा अगाडि हुनुहुन्छ रे । त्यो छलफल, बहस, सामाजिक अभियान होस् या घुमघाम, गेटअप सबैमा । त्यस्तो आँट र ऊर्जा तपाईंमा कसरी आउँछ ?
–आम महिलाहरुभन्दा धेरै अगाडि छु जस्तो त मलाई लाग्दैन । म पनि एउटा सामान्य महिला नै हुँ । जीवन भोेगाइका अनन्त श्रृंखलाहरु सबैको जीवनमा आई नै रहन्छन् । फरक यत्ति हो कि सबैले त्यसलाई शब्दको रुप दिन सक्दैनन् । मैले आफ्नो मनमा लागेका अनुभूतिहरुलाई शब्दमा उतार्ने कोशिश गर्छु ।
हाम्रो समाज पुरुषप्रधान सामन्ती संरचनाले ग्रस्त छ । अहिलेसम्म भएका विभिन्नखाले क्रान्ति र आन्दोलनहरुको बाबजुद पनि पुरुषप्रधान सामन्ती संरचनापूर्ण रुपमा परिवर्तन भएको छैन । यस्तो अवस्थामा हामी महिलाहरु आफ्नो अधिकार स्थापित गर्नको लागि आफै लाग्नुपर्छ । त्यसको लागि हामी सबै हिसाबले सशक्त हुनु जरुरी छ । हामीले आफूमा भएको हिनताबोध, आत्मग्लानी र अविश्वासको भावना त्यागेर आफैलाई विश्वास गर्न सक्यौं भने मात्र अरु धेरै चुनौतीहरुको डटेर सामना गर्न सक्छौं ।
म यत्तिकै आजको अवस्थामा आइपुगेको होइन । महान् जनयुद्ध (भलै त्यो आज आफ्ना उपलब्धि हरुलाई संस्थागत गर्ने प्रकृयामा छ ।) ले दिएको चेतना र जिम्मेवारीका साथसाथै समयसँगै ब्यहोरेका उतारचढावहरुले मलाई आजको ‘आस्था’ बनाएका हुन् । यिनै कुराहरु हुन् जसले मलाई जीवनमा केही गरौं भन्ने आँट र ऊर्जा दिन्छन् ।
विश्वाससँग बिहे गरेपछि मात्र ‘आस्था’ नाम राख्या हो रे नि है तपाईंले ?
–कुरो त्यस्तो होइन । आस्था मेरो बिहे हुनुअगाडिकै नाम हो । हाम्रो जोडीको नाम आस्था र विश्वास हुनु एउटा संयोगमात्रै हो । तर, आस्थालाई विश्वास र विश्वासलाई आस्था मन परेका नामचाहिँ हुन् ।
कतिपयले तपाईंलाई काम गर्ने क्यै होइन, ‘आस्था’ आबद्ध नभएका संघसंस्था खोज्न बत्ती बाल्नुपर्ने भो भन्छन् नि ?
–त्यो त तिनै मान्छेहरुलाई सोध्नुपर्ने हुन्छ । किन तिनीहरु मलाई त्यस्तो भन्छन् । मलाई त त्यस्तो लाग्दैन । म आबद्ध भएका संघ संस्थाहरुमा मलाई दिइएका जिम्मेवारीहरु पूरा गरेकै छु जस्तो मलाई लाग्छ । तपाईले भने जस्तो म धेरै संघ संस्थाहरुमा आबद्ध पनि छैन । मेरो रुचिको क्षेत्र साहित्य र पत्रकारिता हो । त्यहीसँग सम्बन्धित संघ संस्थाहरुमा आबद्ध छु ।
Prevकवि श्यामल भन्छन्, ‘लुकेर बलात्कार गर्दिनँ, खुलेरै प्रेम गर्छु’
Nextएउटा कथा सङ्ग्रहको तयारी गर्दैछु